Qoorqoor oo baxsad ka ah Dhuusamareb | KEYDMEDIA ENGLISH
Qoorqoor oo baxsad ka ah Dhuusamareb
Qoorqoor, wuxuu ka cabsi qabaa in Baarlamaanku kalsoonida kala laabto, xilli muddo xileedkiisii ku dhawaad labo sano ka dhiman tahay, wuxuuna saaxiibbo u dhow u sheegay inuu wax kasta u sameyn doono si uu u dhameysan lahaa waqtiga baaqiga u ah.
CADAADO, Soomaaliya - Madaxweynaha Maamulka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye [Qoorqoor], oo isku diyaarinaya inuu ka gaashaanto daadad siyaasadeed oo kaga soo wajahan Muqdisho, ayaa maanta gaaray degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
Qoorqoor, wuxuu xusay in socdaalkiisu salka ku hayo, arrimo la xiraara dib u dhiska Golihii degaanka Degmada Cadaado, hayeeshee, xogo ay heshay Keydmedia Online, ayaa muujinaya in Qoorqoor, u diyaar garoobayo inuu xafiiskiisa u raro magaalada Cadaado.
Inkastoo dhawaan Madaxweyne Xasan Sheekh, uu Dhuusamareeb ka sheegay in Dowladda Federaalka ay la shaqeyn doonto maamulka Qoorqoor, haddana waxaa jira warar sheegaya in shaqsiyaad aad ugu dhow MW Xasan Sheekh, ay doonayaan in xilka laga tuuro Qoorqoor.
Sida la ogyahay, Abshir Bukhaari iyo Xasan Macallin, ayaa ahaa labada shaqsi ee ugu miisaanka cuslaa kooxdii ololaha Madaxweyne Xasan, waxaana xusid mudan in Qoorqoor labadaba ka hor istaagay in kuraastii Baarlamaan oo ay ku fadhiyeen u tartamaan.
Sidoo kale, Axmed Macallin Fiqi iyo xubno kale, oo ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu oo hor jeeda Qoorqoor, ayaa hadda ka mid ah, dadka gacana midig u ah Xasan, waana sabab kale oo walwalka ku sii kordhineysa madaxweynaha Galmudug.
“Safarka Qoorqoor uu maanta ku tagay Cadaado, wuxuu hordhac u yahay u guuritaankiisa magaaladaas, wuxuu ogyahay jarriimooyinkii siyaasadeed ee uu galay, wuxuu si fiican u fahansan yahay in uusan ka fakan doonin raggii uu godobta ka galay”, ayuu Cali Xasan Cali.
Cali Xasan oo ka mid ah dadka degaanka oo aadka ugu dhuun duleela xogaha Madaxtooyada Galmudug, ayaa sidoo kale, sheegay in Qoorqoor uu durba qorsheeyay inuu qeyb ka mid ah xubnaha Baarlamaanka Galmudug ula guuro magaalada Cadaado.
2-dii Feberaayo 2020, ayaa Qoorqoor loo doortay Madaxweynaha Galmudug, kadib doorasho, jajuub ahayd oo ka dhacday Dhuusamareeb, taasoo ay geed fadhi u ahaayeen, Farmaajo, Kheyre iyo Fahad Yaasiin, kuwaasoo uu u adeegayay labadii sano ee la soo dhaafay.